Indlela yokudweba amehlo omntu kwisinyathelo sepenisi ngesinyathelo: ividiyo yabaqalayo
Umculi ngamnye, ebonisa umfanekiso wesinye umntu, kufuneka akwazi ukubeka amehlo omntu. Ekuqalekeni, kubonakala ngathi akukho nto inzima kule nto. Nangona kunjalo, ukwenzela ukwenza umzobo ufezeke, kubalulekile ukuqwalasela yonke imiba kunye neenkcukacha ezincinci. Indlela yokudweba amehlo omntu ngeepensile?
Ulwakhiwo leso luntu
Iliso lomntu linamalungu amaninzi angaphandle, apho nganye eyenza umsebenzi othile:
iris ne iris;
Ukuze udwebe iliso lomntu nge pencil, kufuneka uqikelele zonke iifolda kwimigca evulekileyo, izithunzi kunye nokunye okuninzi, kwaye ukhethe indawo yehora ngokuchanekileyo. Ngaphandle koko, isibalo siya kubonakala singenakwenzeka.
Umyalelo wenyathelo ngeyunqanaba lokudweba amehlo abantu
Ukudweba kwamehlo omntu ngeepensile kuyimfuneko kwiinqanaba eziliqela. Isinyathelo ngeyinyathelo, umgca ngomgca, ukusuka kwizinto ezisemgangathweni ufumana umfanekiso opheleleyo. Isinyathelo ngesinyathelo inyathelo lokudweba iliso lomntu linokubonakala kumfanekiso.
Okokuqala kufuneka udwebe iliso. Ukwenza oku, kufuneka kufakwe kwifom ye-figure kunye namacangca. Kukhawuleza kuyimfuneko ukudweba iifolda ezibonakala ngaphezu kweelusiki ezingaphezulu kunye nezantsi. Kwakhona, ukuma kweso kungathatyathwa kwimizila emibini ehamba ngaphaya komnye. Umgca ongezantsi ufanele ube mude kunomgca wecala. Emva koko udibanise ngokucacileyo ezi ndawo ezine. Kuboniswe kwikona elingaphakathi lomgcini, ngaphandle kweyiphi iso eliza kuguqula. Amacangca angaphandle kunye angaphakathi angathatyathwa kwelinye nakwiizinga ezahlukeneyo. Iinkalo ezongezelelweyo kufuneka zicinywa.
Kubalulekile ukudweba iris, emele ibe yinto ejikelezileyo. Kubalulekile ukuqwalasela ukuba inxalenye yesithathu ifihliwe yinkophe ephezulu. Ngaphakathi kwe-iris, ngokukodwa phakathi, kufuneka udwebe umfundi, upende ngombala omnyama.
Emva koko unokuqala ukudweba iphosidi ephezulu, emva kwayo inxalenye ye-iris kunye nomfundi. Kule ndlela, indlela yokusebenzisa imizila kwifom yokubetha isetyenziswa. Into ephambili akuyikuyidlula ukuze i-eyayijwayele iphendule ibe yinto enobungakanani obuphezulu, yenziwe mnyama kwindawo yendawo. Emva koko, gwala ijwabu eliphantsi, elikhethiweyo elivela kwikona elingaphakathi kweso.
Isinyathelo esilandelayo kukuba udwebe iqhosha elikufutshane ne-iris kumfundi. Imelelwe njengesangqa esincinci. Ngokuchasene ne-glare, kubonakala umbala wokukhanya oqhekekileyo, osondele kumfundi, kuphela ngakwelinye icala. Le ngqungquthela efuna ukutsalwa kwimigca elula.
Isinyathelo esilandelayo ngumfanekiso weenqanawa kunye neengqungquthela eziphezulu, ezikhusela iso kwizinto ezivela ngaphandle. I-eyebrow ihlala ibeke phezu kwelungu lombono kwaye iqhutywe phambili phambili. Okokuqala kucetyiswa ukuba udwebe umgca wovavanyo, uze udwebe iinwele kuwo. Kwisiseko se-eyebrow kukhulu kuneyona tempile. Izinwele zingenziwa kwicala elinye, okanye zidibanise. Ikhosidi ephezulu iphezu kwekhosidi ephantsi. Kwisithombe esingezantsi ungabona zonke izikhokelo. Kufuneka zigcinwe, ngaphandle koko awuyi kukwazi ukujonga iso.
Amehlo kufuneka ukuba aqulunqwe nge-eyelashes. Ziyakuthatyathwa kwangaphambili, kodwa kwiimigangatho zokugqibela kuya kufuneka ukuba ulungele konke okufanayo. Njengazo zonke izinto, i-eyelashes kufuneka ibheke ingqiqo, kungekhona kwimidwebo yabantwana, apho ifana neefomalile. Isithombiso esingezantsi sibonisa uyilo oluchanekileyo. Eyelashes eziphezulu zihlale zide kunezona ezantsi, zinqamle kwisiseko kwaye zincinci ukuya kwinqonga. Ukwenza oku, njengoko umzobo we-eyelash nganye ukhula, uxinzelelo lwepensile luyancitshiswa.
Isinyathelo sokugqibela siyimfuneko ukwenzela ukususa imigca encedisayo, ukususa imivimbo engadingekile, ukwenza indawo emnyama okanye ilanga okanye indawo emnyama. Oko kukuthi, yenza umzobo wakho uphelele.
Ividiyo: indlela yokudweba amehlo omntu kwisinyathelo sepenisi ngesinyathelo
Ukuba uhambelana nayo yonke imigaqo kunye neengcomo, ukudweba iso ngeke kube nzima. Ukwenza umdwebo ubonakale ungokoqobo, kufuneka ubeke ucezu womphefumlo kuwo. Ividiyo yenza isifundo kubaqalayo, esiza kunceda ukubeka amehlo ngomntu nge pensile, ngokuqwalasela umgca ngamnye. Ukubonakala ngokuqhelana neziphakamiso eziqhelekileyo, nokuba umculi ongenamava uya kuba nako ukudweba ubuso bomntu.
Indlela yokubopha intsimbi yomfazi
AmaGrafski amanxuwa, iresiphi ngesithombe
Iingcebiso ezifanelekileyo kunye nokuzivocavoca zempilo
Izityalo ezingaphakathi: i-aspiristra
Ukuziphatha komama ngokumalunga nentombi yakhe yentombi
Ukuchaneka ngokufanelekileyo ukutshala izityalo zangaphakathi
Udla inyama kunye namazambane Echpochmak
Iingcebiso zoKwenziwa ngaphakathi
Bilberry uhluthwe ngoshukela
Ukukhetha i-kettle kagesi: eyinkimbinkimbi kwaye elula
Isonka ngebhanana kunye nekhilimu omuncu